Kutheni i-selenium kunye nekhukhamba kufuneka zingasetyenziswa kunye
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Kutheni iSelenium kunye nekhukhamba akufuneki zisetyenziswe kunye
Kule posi, ndiza kuchaza ukuba kutheni ndikholelwa ukuba licebo elibi ukubhala iimvavanyo ezizenzekelayo ze-UI ngeSelenium kunye nekhukhamba.
Isihloko sesithuba sikhankanya i-Selenium kunye ne Cucumber kuba zezona zithandwa zibhrawuza ezenzekelayo kunye nezixhobo ze-BDD ngokwahlukeneyo, nangona kunjalo, umxholo weli nqaku usebenza kuso nasiphi na isixhobo esizisebenzelayo se-UI ngokudibanisa nasiphi na isixhobo seBDD.
Ngaphambi kokuba ndimbe nzulu, masiqwalasele olunye ulwazi ngemvelaphi.
Selenium sisixhobo sovavanyo lokuzenzekelayo kwisikhangeli esikwaziyo ukunxibelelana nezinto ze-HTML zesicelo sewebhu ukulinganisa imisebenzi yomsebenzisi.
Kwi-Selenium WebDriver, sinokubhala izikripthi kwinani leelwimi zokuprinta kwaye sinokuba sisixhobo esihle sokuvavanywa kwe-OS kunye nokuwela isikhangeli.
Netyhukhamba yenzelwe ukuqhuba inkqubo yoPhuculo lwendlela yokuziphatha (BDD), ukuze umthengi achaze iimfuno zabo njengothotho lwemizekelo ebizwa ngokuba ziimeko, kwiifayile zombhalo ocacileyo kusetyenziswa ulwimi lweGherkin kwifomathi yeXesha elinikezelweyo emva koko.
Kwilizwe leCucumber, ezi fayile zibizwa ngokuba ziifayile eziqwalaselwayo liqela leSkram ukufumana ukuqonda okucacileyo kweemfuno ngaphambi kokuqala uphuhliso lokwenyani.
Nje ukuba uphuhliso luqhubeke, abaphuhlisi kunye / okanye i-QA baya kubhala iiNkcazo zeNyathelo ezizezona zibophelelayo zekhowudi ezibopha iimeko ezivela kwiifayile ezibonakalayo ukuya kwikhowudi yovavanyo eyenza isenzo ngokuchasene nesicelo phantsi kovavanyo.
Selenium kunye nekhukhamba
Zombini i-Selenium kunye nekhukhamba zizixhobo ezilungileyo zeenjongo zazo kodwa xa zisetyenziswa kunye, izinto azitshati kakuhle! Makhe sibone ukuba kutheni.
Amabali abhalwa ngokubanzi ngokwembono yomsebenzisi, umzekelo:
Phawu: Ukusebenza ngokungena
Njengomsebenzisi wewebhusayithi abc.com
Ndifuna abathengi babe nakho ukungena kwisiza
Ukuze bajonge ulwazi lweakhawunti yabo.
Kwelinye icala, ii-Scenarios ezikwiifayile zeempawu zibhalwe ngendlela echaza indlela yokuziphatha kwento xa umsebenzisi enxibelelana isicelo . Umzekelo:
Imeko yoku-1: Ukungena ngokuchanekileyo
Ngenxa yokuba ndikwiphepha lokungena le-abc.com
Xa ndifaka iziqinisekiso ezifanelekileyo
Emva koko ndithunyelwe kwiphepha lam leAkhawunti
Kwaye ke unokongeza iimeko ngakumbi ukuvavanya ukudityaniswa kwedatha eyahlukeneyo.
Kuba zombini ibali kunye nefayile yefayile ibhaliwe kwinqanaba eliphezulu lokujonga, kwaye kuba sifuna ukuzenzekelayo iimeko, kubonakala ngathi kuyindalo ukuqala ukubhala iinkcazo zenyathelo kwiCucumber ezibiza iSelenium ukuqhuba usetyenziso, yenza iintshukumo kwaye uqinisekise isiphumo.
Kodwa, kulapho ingxaki ivela khona; xa siqala ukudibanisa iSelenium neCucumber ukubhala iimvavanyo ze-UI ezizenzekelayo.
Kuko konke ukulunga, kwiimeko ezilula ezinje ngemeko yokungena apha ngasentla, izinto zilungelelene ngokudibeneyo kwaye indlela ibonakala ibonakala, kwaye enyanisweni, uninzi lwemizekelo oyibonayo kwi-intanethi, ebonisa ukusetyenziswa kweSelenium kunye nekhukhamba, kubonakala ngathi bayazikhawulela Umzekelo wokuNgena odumileyo.
Abafundi beeblogi ezinjalo banokucinga ukuba banokuthatha imeko elula yokuNgena kwaye basebenzise umgaqo ofanayo kwimeko ebanzi yesicelo.
Musa ukukhohliswa nangona kunjalo, njengoko izinto zinokuba muncu kakhulu ngeSelenium kunye neKhukhamba xa isetyenziswa kwisicelo sehlabathi esikwiwebhu esikhulu.
Masithathe umzekelo weziphumo zophando lwe-e-commerce yesicelo esithengisa iimveliso kwi-intanethi. Ngokwesiqhelo iphepha leziphumo likhangela izinto, ezinjengezihluzo, iintlobo, uluhlu lweemveliso, ukubanakho ukutshintsha ukukhangela, ukubanakho ukuphehla okanye ukulayisha ngokuzenzekelayo ekukhuseleni, njl njl, njengoko kunokubonwa kumfanekiso ongezantsi:
Ndiza kuthatha ukuba inqaku ngalinye kwiphepha leziphumo zokukhangela, longezwe kwisiza ngokwanda kokusebenzisa ukukhula kwe-agile.
Ukufaka umgaqo ofanayo kumzekelo wethu olula wokuNgena, njengoko into nganye iphuhlisiwe siya kuba nefayile yefayile efanelekileyo egcwele iimeko ezahlukeneyo. Umzekelo:
Kwi-iteration 1 yophuhliso, 'Icebo lokucoca ngexabiso' liphuhlisiwe, ke sinokuba nefayile ebonakalayo kuyo kunye nemeko zayo ezinxulumene nefilitha yexabiso.
Kwi-iteration 2 yophuhliso, 'Icebo lokucoca ngexabiso leNkanyezi' liphuhlisiwe, ke siya kuba nefayile ebonakalayo kuyo kunye nemeko zayo ezinxulumene nefilitha yokulinganisa iinkwenkwezi, njalo njalo kwinto nganye entsha.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imeko kwifayile nganye yenqaku zichaphazela icandelo labo. Ngapha koko, yiyo loo nto bebizwa njalo iifayile zeefayile kuba kugxilwe Iimpawu ezizodwa .
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, xa isicelo silula, singasinda kumceli mngeni wokuzenzekelayo iimeko ezikwi-UI ngeSelenium kunye nekhukhamba. Nangona kunjalo, njengoko isicelo sikhula kunye neempawu ezintsha zongezwa, ubunzima buvela njengoko kunokubakho ukuxhomekeka phakathi kweempawu ezahlukeneyo.
Umzekelo, bendiqala ukucoca iziphumo zam zokukhangela ngexabiso emva koko ndisebenzise esinye isihluzi kumgangatho weenkwenkwezi. Ah… ngoku sinengxaki!
Yeyiphi ifayile yefayile ekufuneka iye kuyo ngoku? Kwifayile 'yeFilitha ngokokulinganiswa kweNkanyezi' okanye ifayile 'yokuCoca ngexabiso'? Ungathini ukuba ngoku ndongeza imeko yokufaka uhlobo kwiziphumo zam ezihluziweyo ukuze ndihlele ngokweevoti eziphezulu?
Ukuba umntu ochaphazelekayo unqwenela ukubona ukuba loluphi uvavanyo lwethu, yeyiphi yeefayile ekufuneka ejonge kuzo? Ngaba uya kufumana umfanekiso opheleleyo wokugubungela imeko ngokufunda enye yeefayile okanye ngaba kuya kufuneka afunde zonke iifayile?
Ngexesha lokuphuhliswa, xa inqaku ngalinye liphuhliswa nganye nganye kwi-iteration nganye, iifayile zefayile ziya kugxila kwinqaku ngokwalo, ke ngaxa lithile, xa sinezinto ezininzi, kufuneka siqale ukucinga ngokuvavanya ezi, hayi kukodwa kuphela kodwa nakwimeko zokuyila apho sidibanisa amanqaku ahlukeneyo.
Kwaye eneneni, nantsi into eya kwenziwa ngabasebenzisi bokwenyani besicelo. Baza kuqala ukungena kwiikhrayitheriya zokukhangela, kube kanye kwiphepha leziphumo zokukhangela, banokukhetha ukupeyinta, emva koko bacoca, emva koko bahlele, emva koko babuyele emva, njalo njalo, kwaye banokwenza ezi zenzo kuwo nawuphi na umyalelo. Akuyi kubakho myalelo omiselweyo weziganeko. Oku yi olona hambo lomsebenzisi kunye novavanyo lokwenyani lwenkqubo!
Ubuninzi beebugs kwisicelo ziyavezwa xa inqaku ngokwalo liyinkunkuma okanye xa izinto ezimbini zisebenza ngokugqibeleleyo zodwa, musa ukusebenza kunye. Yile nto imodeli yokuvavanywa kwesibini esekwe kuyo.
Ke, yintoni enkulu ekusebenziseni iSelenium kunye neCucumber kunye?
Apho kunokwenzeka, akufuneki sisebenzise i-web GUI yokuqinisekisa ukusebenza. Ukusebenza kwenqaku kufuneka kuvavanywe kumaleko we-API ngovavanyo lokudityaniswa.
I-UI kufuneka igcinelwe kuphela ukujonga ukuhamba komsebenzisi kwisicelo, okanye kuvavanyo lokuphela kunye nokuqinisekisa ukuba iimodyuli ezilindelekileyo ezifanelekileyo okanye iiwijethi zikhona kwiphepha njengoko umsebenzisi ehamba kwelinye iphepha ukuya kwelinye.
Uhambo oluqhelekileyo lomsebenzisi luya kubandakanya:
1 - Jonga kwiphepha lasekhaya le-abc.com iwebhusayithi
2 -Khangela imveliso kwiphepha lasekhaya
3 -Khangela kuluhlu lweziphumo zokukhangela
4-Faka isihluzo kunye / okanye uhlele
5 - Funda iinkcukacha zemveliso
6 - Yongeza imveliso kubhasikidi
7 - Qhubeka ujonge ...
I-Selenium ibalasele ngokuzenzekelayo kwezi meko kunye nokujonga izinto ezahlukeneyo kwiphepha ngalinye kwaye njengoko benditshilo apha ngasentla, yile nto ekufuneka sigxile kuyo xa kuvavanywa umaleko we-UI, kunye nokuvavanya iinguqu ezahlukeneyo zamazwe.
Njengoko kunokubonwa, uhambo ngalunye lomsebenzisi ngesicelo lichukumisa kumaphepha amaninzi kwaye linokunxibelelana nezinto ezininzi kwiphepha ngalinye, kwaye siya kuba siqinisekisa izinto ezahlukeneyo kwinyathelo ngalinye kuhambo lonke, sisebenzisa ifayile yefayile ukubhala ezi meko akunangqondo kwaphela, kuba asivavanyi inqaku, sivavanya inkqubo edibeneyo.
Izinto zihamba njengepeyinti xa sizama ukubhala iimeko zokugqibela-kwifomathi enikiweyo-xa-emva koko ifomathi. Zingaphi ii-Givens esiza kuba nazo? Zingaphi iiToves esizakuba nazo?
Umntu unokuphikisa ukuba kuvavanyo lokuphela kokuphela sinokusebenzisa iSelenium ngokwalo ngaphandle kweCucumber kwaye sineemvavanyo ezizenzekelayo zecandelo ngalinye lisebenzisa iSelenium neCucumber. Kwakhona, andikukhuthazi le ndlela njengoko unokuba novavanyo oluphindaphindiweyo kwaye siyazi ukuba zicotha kangakanani kwaye zincinci iimvavanyo ze-UI, ke kufanelekile ukuba sijolise ekunciphiseni kwazo! Ngaphaya koko, kuya kufuneka ujongane neemvavanyo zokuxhomekeka kwento.
Ikhukhamba sisixhobo esikhulu ekujongeni indlela yokuziphatha kwinqanaba le-API kunye neemvavanyo zokudibanisa apho inqaku ngalinye linokuvavanywa kakuhle. Esi sixhobo kufuneka sisetyenziselwe ukuvavanywa kwamabali.
I-Selenium sisixhobo esihle sokwenza iimeko zomsebenzisi ezizenzekelayo kubume be-UI kunye nokujonga indlela yokuziphatha kwenkqubo iphela, kubandakanya amabali amaninzi omsebenzisi.
Xa sifika kuvavanyo lweNkqubo yokuDityaniswa koVavanyo okanye uVavanyo lwe-UI, kungcono ukusebenzisa iSelenium ngaphandle kwesakhelo seCucumber njengoko uzama ukubhala iifayile zeKhukhamba kuhambo lomsebenzisi, zinokuba nzima kakhulu kwaye azizukusebenzela injongo yesixhobo esakhelweyo.
Inqaku lam lijolise ekuchazeni iinyani!
Ukuba kukho naliphi na ixabiso ekusebenziseni ikhukhamba, kukwinqanaba lenqaku.
Ukujonga ukusebenza kwenqaku kungcono kwenziwe ngaphandle kwe-UI, o.k.t. Uvavanyo lwe-API.
Nokuba kuvavanyo lwe-API, ikhukhamba isilela ngokulusizi.
Uvavanyo lwe-UI kufuneka lugubungele imeko yomsebenzisi / yeshishini kwaye ingabi ziimpawu ezizodwa.
Ikhukhamba isebenza kakuhle ngombono olula kwaye ongenalwazi wovavanyo kunye neemeko, ezinje ngokusebenza kokuthanda kokungena komntu wonke.
Ngenxa yokuba ndikwiphepha lokungena
Emva koko kuya kufuneka ndibone iakhawunti yam
Kodwa nawuphi na umvavanyi we-savvy uyazi ukuba nokusebenza ngokulula kokungena kukujonga okuninzi. Zama ukuguqula ezo tshekhi kwiikhukhamba.
Le yeyokungena kuphela; zama ukubhala uvavanyo lokuphela kokugqibela kwiikhukhamba!
Uvavanyo lwe-UI kufuneka lugubungele uhambo lomsebenzisi oluhlala luphela ukuya esiphelweni kwaye lusebenzisa amanqaku amaninzi esicelo.
Kuninzi okuqhubekayo kuhambo lomsebenzisi olunye kwisicelo.
Ikhukhamba ngokuqinisekileyo ayisosixhobo esifanelekileyo sokuvavanywa komsebenzisi / kweshishini.
ziphume nini iifowuni
Izityalo vs Zombies 2 zifumana uhlaziyo lwezityalo zamandla ngamathuba amatsha okudlala umdlalo
Ngaba ufuna ityala elimnyama okanye elinguJet Black iPhone 7? Ezi ziya kukugubungela
I-AT & T iba ngumphathi wokuqala ophambili wase-US ukuhlaziya i-Galaxy Note 9 kwi-Android 10
Xutha i-32 GB ye-Galaxy S7 ngemvumelwano yeminyaka emi-2 yeVerizon ye- $ 99.99 kwi-BestBuy, gcina i- $ 100
Ukunyusa iselfowuni kuqala ukuthengisa i-iPhone 12 Pro Max kunye ne-iPhone 12 Mini
Ithetha ntoni ukubonisa iRetina kwi-iPad mini 2?
I-Galaxy Qaphela i-8 vs iifowuni ezinkulu ezentengiso: ukuthelekisa ubungakanani